Tsy ampiharina ny lalàna : tena misy ny fanondranana omby any ivelany | NewsMada
Tsy ampiharina ny lalàna : tena misy ny fanondranana omby any ivelany
Araka ny fanadihadiana notaterina teto (Taratra, 21 aogositra 2017), ahitana fatin’omby manodidina ny 60 miparitaka any amin’ny fokontany sy kaominina Antetezambaro, distrika Toamasina II. Ahitana izany ao amin’ny valabe, mirefy 95 ha tantanin’ny orinasa Mada Ranch, voalaza fa mitantana omby aondrana any ivelany. Omby reraka avy any atsimon’ny Nosy ireo maty ho azy ireo, avy notaterina tamin’ny kamiao. Tsy iverenana ny mikasika azy ireo, saingy manamarina izao tranga izao, fa misy tokoa ny fanondranana omby any ivelany.
Tranga iray ihany ity nosinganina ity, saingy maro ny tranga hitan’ny fiarahamonina amin’ny fanondranana omby toy ireo kamiao marobe mandeha amin’ny lalam-pirenena fahenina (RN 6), mihazo an’Antsohihy sy ny mianavaratra ary voalaza fa omby haondrana any ivelany ireny tateriny ireny.
Nakatona ny orinasa teny Vontovorona
Tsy nahenoana fanazavana izao tsy fampiharana ny lalàna izao ny fanjakana. Vao tsy ela anefa ny fanjakana nanamafy fa voarara tanteraka ny fanondranana omby velona sy henan’omby any ivelany, saingy mahavariana misy orinasa mahazo fahazoan-dalana ihany. Mety ho marina amin’ny ampahany ny filazany izany raha raisina amin’ny fanakatonana ny orinasa famonoana omby sy fikarakarana henan’omby teny Vontovorona sy any Toliara, notantanin’ny orinasa sinoa. Saingy, mahavariana fa milaza ho manana fahazoan-dalana hanondrana omby velona any ivelany ary hanangana toeram-pamonoan’omby (abatoara) koa ilay orinasa any Antanandava, Toamasina II. Voalazan’ny tompon’andraikitra ao fa afaka mamono omby 150 isan’andro io abatoara io. Midika izany fa mety hanondrana henan’omby any ivelany koa ity orinasa ity.